रामवीरका चुनावी कमाण्डर भन्छन्- वामदेवका लागि कसरी भोट माग्नु? -
रामवीरका चुनावी कमाण्डर भन्छन्- वामदेवका लागि कसरी भोट माग्नु?
गत निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउन भन्दै काठमाडौं-७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरले राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौं-७ कै नेकपा नेता/कार्यकर्ताले रामवीरले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी जनचाहनाविपरित हठातमा राजीनामामा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टीको पकड राम्रो भए पनि निर्वाचित सांसदले अकस्मात राजीनामा दिएर बाहिरका मान्छेलाई जिताउन उपनिर्वाचन गर्दा आफूहरूलाई भोट माग्न अप्ठेरो हुने बताएका छन्।
काठमाडौं-७ मा महानगरका १६, १७,१८ र २५ वडा पर्छन्। त्यस्तै नागार्जुन नगरपालिकाका १, २ र ३ अनि तारेकश्वर नगरपालिकाका ३, ४ र ५ वडा यही क्षेत्रमा छन्। १० वडामध्ये गत स्थानीय चुनावमा ६ वडामा तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने ४ वडामा कांग्रेसले अध्यक्ष जितेको छ।
अहिले एउटै पार्टी बनेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका वडाअध्यक्ष उम्मेदवारहरूले पाएको जम्मा मत १७,०२३ छ। त्यस्तै संघीय चुनावमा तालमेल गरेका कांग्रेस र राप्रपाका वडाअध्यक्ष उम्मेदवारले १४,७९३ मत पाएका छन्।
सेतोपाटी टिमले बुधबार काठमाडौं- ७ मा पर्ने विभिन्न वडाहरूमा गई नेकपाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र झन्डै चार दर्जन बढी मतदातासँग रामवीरको राजीनामा र उपचुनावबारे कुराकानी गरेको छ।
आज नेकपा नेता/कार्यकर्ताको विचार प्रकाशित गरिएको छ। आम मतदाताको ‘भक्स पप’ बिहीबार प्रकाशित गरिनेछ।
न्हुछेकाजी महर्जन, वडाअध्यक्ष (काठमाडौं-१८)
स्थानीय चुनावमा यहाँकवो वडाअध्यक्ष जितेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा म यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको चुनावी कमाण्डर थिएँ। ७० प्रतिशत नेवार र बाँकी अरू समुदायका मतदाता रहेको यो क्षेत्रमा रामवीरलाई चुनाव जिताउन आफू पनि खटिएँ, साथीभाइलाई पनि खटाएँ। केन्द्र र प्रदेशमा तीनै जना हाम्रा उम्मेदवार विजयी भए।
सोमबार म मनकामना गएको थिएँ। एकाएक वामदेवका लागि रामवीरले राजीनामा दिएको खबर सुनें। अचम्म लाग्यो। कसरी यस्तो निर्णय गर्न सक्नुभएको होला। प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ र बसन्त मानन्धरलाई पनि जानकारी दिनुभएको रहेनछ।
एक पटक यहाँका जनताका प्रतिनिधिलाई सोध्ने हिम्मत गर्नुभएन। चुनावी कमाण्डर गरेको मलाई पनि सोध्नुभएन। किन गर्नुभयो त्यो उहाँले स्पष्ट बताउनुभएको पनि छैन। मैले फोन गर्दा उठाउनु भएको छैन, फोन गर्नु भएको पनि छैन।
वामदेव गौतम यहाँ आएर चुनाव लड्ने कुराको निर्णय हुन बाँकी छ। भोलिपर्सि के होला अहिले नै भन्ने अवस्था रहेन। तर, यहाँ नेवार समुदायको वर्चश्व छ। ७० प्रतिशत जनसंख्या यो जातिको छ। रामवीर नेवार समुदायले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हो। वामदेव गौतम आएर चुनाव लड्न यहाँ सजिलो हुँदैन।
गत वर्षको चुनावमा मेरो वडामा रामवीरलाई होइन मलाई भनेर जनताले भोट दिएका थिए। हिजोको चुनावी कमाण्डर मैले आज जनतालाई रामवीरको राजीनामाबारे के बोल्ने? के जवाफ दिने? वामदेवका लागि के भनेर भोट माग्ने? मलाई भोट भाग्न निकै गाह्रो हुन्छ।
अनन्तमणि आचार्य, वडा सदस्य (तारकेश्वर-५)
यहाँ विकासका कुरालाई लिएर स्थानीय आक्रोशित छन्। हामीले स्थानीय निकाय निर्वाचन भएको यतिबेलासम्म पनि जनता खुसी हुने गरी विकास निर्माण गर्न सकेका छैनौं। यहाँ राम्रो होला, विकासको ढोका खुल्ला भनेर रामवीरलाई जिताएर पठाएका हौं। चुनावमा म पनि रातदिन खटिएको थिएँ। यहाँका जनता पार्टीको नेताभन्दा पनि विकास कसले गर्छ त्यो हेरिरहेका छन्।
चुनाव भइहाल्यो भने त हामी कार्यकर्ताले त भोट हाल्नै पर्‍यो। तर, यहाँको स्थानीय मान्छे उठ्दा जे भनेर भोट मागिएको थियो। बाहिरको मान्छे चुनाव लड्न आउँदा त्यसरी भन्न नसकिएला।
हाम्रा केही माग छन्, चुनावअघि यहाँ केही न केही विकासको सुरूआत गरिदिनुपर्छ। जनताले देख्नेगरी, चित्तबुझ्ने गरी कसैले काम गरे भोट दिइहाल्छन् नि।
बसन्त मानन्धर, प्रदेश सभा सदस्य (काठमाडौं ७ ख)
सोमबार हामी दुबै जना(अर्का प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ) हेटौंडामा थियौं। रामवीरजीले राजीनामा दिनेबारे केही कुरा गर्नुभएको थिएन। हिजो हामीसँगै चुनावी मोर्चामा थियौं तर चुनाव जित्दा काँधमा काँध मिलाउने हामीसँग राजीनामा दिनेजस्तो निर्णय गर्दा एकपटक सोध्नु पनि भएन। के भएको हो हामीलाई थाहै भएन। समाचार आएपछि उहाँसँग कुरा गर्दा पनि तर्कनहुन्छ। यहाँका जनता र पार्टी नेता/कार्यकर्ताको चाहनाविपरित हठात् राजीनामा दिने उहाँको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यही विषयमा कुरा गर्न हामी आज बिहान पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका थियौं। हामीले यो क्षेत्रको सबै माहौलका बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं।
वामदेव कमरेड यो क्षेत्रमा चुनाव लडेर जित्नुभयो भने त ठिकै छ तर हार्नुभयो भने हाम्रो पार्टी छिन्नभिन्न हुन्छ। व्यक्ति त हामी जोकोही पनि आउनेजाने भइरहन्छ तर पार्टीको संगठन भंग भयो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बतायौं। उहाँले पार्टीमा छलफल गरेरमात्र राजीनामाबारे निर्णय हुने बताउनु भएको छ। हेरौं के हुन्छ।
Previous सम्बन्ध सुधार्दै पारस–हिमानी
Next Examining Effective Foreign Brides Secrets